Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Francisco Vaz Patto as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portuguese Republic to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Francisco Vaz Patto as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portuguese Republic to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Francisco Vaz Patto as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portuguese Republic to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Francisco Vaz Patto was born on7October 1966 in Beria, Mozambique. He attainedalaw degree andapost – graduate degree in European Studies from the Catholic University of Lisbon. He joined the Ministry of Foreign Affairs of the Portuguese Republic in 1990. He then served at the respective Portuguese Embassies in Bonn, Berlin and Luanda from 1995 to 1999. He also served asaHead of European Institutions Department , asachief of cabinet of the Secretary of State for European Affairs and as the Director- General for Administration at the Ministry of Foreign Affairs. Since November 2015, he has been serving as an Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portugal to the Kingdom of Thailand.
Dated:7March 2016
မစ္စတာ ဖရန်စစ္စကို ဗာ့စ် ပါတိုကိုအား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဖရန်စစ္စကို ဗာ့စ် ပါတိုကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ၊ ဘေရာမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လစ္စဘွန်းမြို့၊ ကက်သလစ် တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့နှင့် ဥရောပလေ့လာမှု ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ်တွင် ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဘွန်းမြို့၊ ဘာလင်မြို့နှင့် လူအန်ဒါမြို့တို့ရှိ ပေါ်တူဂီသံရုံးအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥရောပအဖွဲ့အစည်းများဌာန၏ အကြီးအကဲအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဥရောပရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီး၏ အဖွဲ့မှူး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပေါ်တူဂီသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၇ ရက်